Jiilaal adag ka dib, abaal-marin mudan tabaruceyaashayada - Cunnooyinka on Wheels
Jiilaal adag ka dib, maamuus mutadawiciinteenna
Jiilaalkii la soo dhaafay wuxuu ahaa mid adag, xitaa heerarka Minnesota. Inbadan oo naga mid ah ayaan dhib kala kulmin barafka, barafka iyo qabowga waqti uun, laakiin jiilaalka xad dhaafka ah ayaa xitaa ka sii dhib badnaan kara kuwa dhaqdhaqaaqa yar.
Cunnooyinka badankood ee qaatayaasha Wheels waxay ku dhacaan qaybtaan. Booqashada maalinlaha ah ee ay bixiyaan mutadawiciinteenu waa la qiimeeyaa waana la qiimeeyaa sanadka oo dhan, laakiin marka jiilaalka uu xannibo safarka xitaa intaas in ka sii badan ayey is dhexgalka ka sii muhiimsan yahay.
Weligey ma arag jiilaal sidan oo kale ah. Waa inaan baajiyo ballamaha, ”ayay tiri Virginia Reilly, oo cunno ku heleysa Minneapolis. "Markii aan yaraa waxaan la qabsan jiray wax walba laakiin tan way igu adkaatay."
Dayr kasta, Cuntada on Wheels kooxaha mutadawiciinta ah waxay soo xirxiraan kumanaan Khaanadaha Blizzard Khaanadaha loogu talagalay dadka qaata inay isticmaalaan maalmaha ay tahay in barnaamijyada xaafadeenna ay kansal gareeyaan keenista. Sanduuqyadaas si wanaagsan ayaa loo adeegsaday sannadkan. In kastoo maalmaha badankood, mutadawiciinteennu ay ka adkaadeen cimilada oo ay u fidiyeen gargaar muhiim ah kuwa u baahan.
"Aad ayey iigu fiicantahay aniga inaan yeesho xiriirka bulshada," ayay tiri Virginia. “Tabaruceyaashu kaliya iima keenaan xirmo Arbacada. Waa shay bulsho weyn. Waxaad la kulmeysaa dad wax keenaya. ”
Dhammaan mutadawiciintii sida joogtada ah u geyn jiray cuntada iyo dhoola cadeynta jiilaalkan: Waxaad ka caawisay dadkii aad u dhiibtay in ka badan intaad ogtahay.
Halkan ka hel macluumaad dheeri ah oo ku saabsan iskaa wax u qabso ee Cunnooyinka Lugaha.
Laga yaabaa 2, 2019